Kildare मा १२ सर्वश्रेष्ठ आउटडोर भोजन स्थलहरु - IntoKildare
रेस्टुरेन्ट, क्याफे, बार र Kildare को खाना उत्पादकहरु तपाइँलाई स्वागत गर्न को लागी तयार छन्। बाहिरी भोजन विकल्पहरु को छनौट बाट नमूना हामीले एक साथ राखेका छौं जसले तपाइँलाई यो गर्मी मा किल्डारे मा प्रस्ताव मा के छ एक स्वाद दिनेछ।
सिल्केन थॉमस कुनै पाठ २ 2x768
मा एक सुन्दर बगैंचा छत मा व्यापक मेनु बाट लंच वा डिनर को आनन्द लिनुहोस् सिल्कन थोमा, Kildare शहर मा। भोजन स्लट २ घण्टा को लागी एक क्षेत्र को साथ मा पूर्व वा पोस्ट डिनर क्राफ्ट बियर वा ककटेल मा रमाईलो गर्न को लागी हो। बुक गर्न, क्लिक गर्नुहोस् यहाँ वा फोन 045२०522232 XNUMX२०XNUMX।
हरीयो ताल मा हंस
हरियो मा हंस, एक स्थानीय परिवार delicatessen र सुन्दर लेकसाइड क्षेत्र को नजिकै कैफे, बिहान को बेलुका खाना को लागी बिहान को खाजा र दोपहर को भोजन को साथसाथै स्वादिष्ट व्यवहार को लागी तपाइँको चिया वा कफी संगै खाना को लागी खुला छ। कुनै बुकिंग आवश्यक छैन।
Kilcullen को Fallons
2021 05 24 नयाँ 71024768 I1
Curragh को किनार मा र Liffey नदी को किनार मा स्थित छ, Kilcullen को Fallons, लंच र डिनर को लागी मंगलबार देखि आइतबार सम्म खुला रहनेछ, तपाइँको टेबल बुक गर्नुहोस् यहाँ.
के क्लब मा पाल्मर
Kclub Thepalmer टेरेस २
शानदार ताजा र समकालीन तर आश्वस्त क्लासिक, पाल्मर K क्लब मा एक उज्ज्वल र प्रारम्भिक नाश्ता, फुर्सतको खाजा र डिनर हरेक साँझ सबै आदेश को माध्यम बाट अन्तिम आदेशहरु को लागी सेवा गर्दछ। पाल्मर को आरामदायक ग्लेज्ड टेरेस दुबै फिर्ता लिन सकिने छत र रोल डाउन गिलास प्यानल छ त्यसैले तपाइँ सधैं मौसम को सबै भन्दा राम्रो बाट लाभ उठाउनुहुन्छ, साथै आगन्तुक को एक श्रृंखला को रूप मा पाहुनाहरु को लागी एक पूर्व डिनर पेय वा एक रात को शिविर को मजा लिन को लागी। सम्पत्ती मा साँझ ढल्छ। पाल्मर मा फोकस आधुनिक आराम खाना मा छ, क्लासिक व्यंजनहरु बाट flatbreads, प्लेटहरु साझा, ताजा सलाद र माछा, ग्रिल बाट महान खाना र उदार र स्वादिष्ट पक्षहरु को धेरै। पाल्मर एक विलासी तर अनौपचारिक वातावरण मा नेतृत्व बर्तन उत्पादन गर्न एक धूप र सन्तोषजनक दृष्टिकोण लिन्छ।
Balyna एस्टेट, Moyvally
ऐतिहासिक Kildare ग्रामीण इलाका को 550 एकड को बीच सेट, मोयभल्ली होटल र गोल्फ रिजोर्ट एक आरामदायक भोजन को लागी आश्चर्यजनक दृश्यहरु बाट घेरिएका साथीहरु संग पकडने को लागी उत्तम स्थान हो। लंच र डिनर, फोन को लागी खोल्नुहोस् (0) 46 954 8000 आरक्षण गर्न।
भिक्टोरियन चिया कोठा 2
को घाम आंगन मा केक, कफी वा दोपहर का भोजन को आनन्द लिनुहोस् भिक्टोरियन चिया कोठा Straffan मा। मंगलबार देखि शनिवार सम्म खोल्नुहोस्, कुनै बुकिंग आवश्यक छैन।
आराम गर्नुहोस् र एक मेनू को आनन्द लिनुहोस् कि ओक बार टेरेस मा पारिवारिक भाडा र यूरोपीयन व्यंजन को एक मिश्रण प्रदान गर्दछ वेस्टग्रोभ होटल क्लेनमा। दिउँसो १२ बजे देखि ४ बजेसम्म र साँझ ५ बजे देखि 12 बजे सम्म डिनर। सबै भोजन आरक्षण45 फोन गरेर अग्रिम बनाउनु पर्छ
लिली र जंगली स्यान्डविच, सलाद, चिया र कफी संग व्यवहार सबै आफ्नो पुरानो ट्रक बाट सेवा, उपलब्ध सीट संग, नास रेसकोर्स मा उपलब्ध छ। Takeaway पिकनिकहरु रेसकोर्स मा वा अगाडि टाढा मा रमाईलो गर्न को लागी उपलब्ध छन्। आदेश यहाँ.
ओस ड्रप इन
ओस ड्रप 20201223 011455 768x576
यो ओस ड्रप Gastropub Kill को गाउँ मा लन्च र डिनर को लागी बुधवार देखि आइतवार खुला छ। उनीहरुको विस्तृत श्रृंखला बाट शिल्प बियर सहित स्थानीय उत्पादन गरीएको उत्पादन को आनन्द लिनुहोस्। तपाइँको टेरेस टेबल बुक गर्नुहोस् यहाँ.
ब्रन्च, लंच र डिनर को एक विकल्प मा पर्खिरहेको छ न्यायाधीश रोय बीन्स, न्यूब्रिज। सोमबार देखि आइतबार सम्म बिहान 8 बजे देखि ११.३० बजे सम्म खुला, तपाइँको टेबल बुक गर्नुहोस् यहाँ.
Keadeen गार्ड Summ5450x600
Saddlers बार र बिस्ट्रो मा Keadeen होटल Newbridge मा 12.30pm बाट 2.30pm (सीमित मेनु) र डिनर 5pm बाट 8.30pm सम्म लंच को लागी खुला छ। उनीहरु बियर र ककटेल गार्डन मा बन्द गर्न को लागी १२.३० बजे एक बाहिरी पट्टी सेवा प्रदान गरीरहेका छन्। भोजन र पेय को लागी सीमित ठाउँ, पैदल मात्र मा-कुनै बुकिंग लिईएको छैन।
मा Gallops भोजनालय किल्डारे हाउस होटल Kildare को विरासत शहर मा, नाश्ता, लंच र डिनर को लागी एक विविध र स्वादिष्ट मेनू छ। तपाइँको टेबल बुक गर्नुहोस् यहाँ.
केटीहरु रमाईलो मात्र गर्न चाहन्छन्…। Kildare शैली !!
किल्डारे होटेलमा जादुई क्रिसमस ब्रेक छ